Kooxda Jwxo-shiil oo Weer Cad u Xidhatay Wadiifadii Dhex Martay Ururka UWSLF iyo Dawlada Itobiya – Rasaasa News
Apr 22, 2010 Itobiya, Jwxo-shiil, Ogadeeniya, UWSLF
Cadha hunguri cadhooyinka ka xun, ururka UWSLF iyo Kooxda Jwxo-shiil waxaa dhexyaalay dagaal colaadeed oo ka xun midka ay labadooduba sheegaan in ay kula jiraan dawlada Itobiya. Heshiis in uu dhex marana waxaa diiday Jwxo-shiil, oo isagu dan gaar ah leh Eritreana dabada la galay dambiyo badana ka galay dadweynaha Somalida Ogadeeniya isaga oo fulinaya amarada Eritrea.
Geedka toosan sansaankaad ka garan, waxaa xaqiiq ah in kooxda Jwxo-shiil, ayna waligood niyadooda galin wax la yidhaahdo mabaa,dii xornimo doon, laakiin waxaa kaliya oo lagu afuufay dabayl socotay deedna ay iska raaceen. Waxaa dhab ah xitaa hadii ay ummadu wada raacdo oo ay tidhaahdo Jwxo-shiil, waanu raacsanahay in uusan garanaynin meel uu mariyo mabda,a loo dhiibay, balse sanooyin ka dib in ay iska dhamaan.
UWSLF, oo ahyd muddo Jabhad laga takooray siyaasada dhulka Somalida Ogadeeniya lana necbaysiiyey dadweynaha iyada oo loo sababaystay in siyaasadeeda ay hagaan dad shisheeye ah. Hadaba, waxaa arintaas been ka dhigay markii uu ururku heshiis taariikhi ah la galay xukuumada Itobiya, isaga oo ururku horay u eegay tobanka sano ee inagu soo aadan duruufta ka jiri doonta dhulka Somalida Ogadeeniya iyo guud ahaan Jamhuuriyada Somaliya.
Heshiiskaas ayaa sida socota waxaa soo dhaweeyey guud ahaan dadweynaha iyo siyaasiyiinta geeska afrika, wanaaga la filayo in uu dhacana waxaa uu ku xidhnaan doonaa xukuumada Itobiya iyo waliba siyaasiyiinta u dhalatay gabalka.
Waxaa hadaba, uu jahawareer iyo cantaatac aan meela haysan uu ka soo hadhay kooxda Jwxo-shiil, oo aad moodo in ay isku waday in ay buuxiso booska ay maanta buuxisay Somali Galbeed, kaas oo aan marna laga filayn in ay samayn karto Somali Galbeed.
Run waxaa ah in hadii heshiiska ay Somali Galbeed gashay Itobiya uu hir galo in uu heshiis u noqon doono ruux walba oo gabalka u dhashay oo ay ku jiraan kooxda Jwxo-shiil iyo golaha sare ee ONLF. Waxaana uu isbadal ku keeni doonaa dhinacyada nabad galiyada iyo waxaana yaraandoonta gaajada iyo oonka ka jira dhulka Somalida Ogadeeniya inta ayna imanin talaabooyin keeni kara horumar.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxay bilowday afxumooyin ay u gaysanayaan ururka UWSLF, waxayna abuurayaan arimo ka fog siyaasada dhabta ah ee xiligan ka jirta gabalka Somalida Ogadeeniya. Jwxo-shiil, oo ah ruuxa maanta gaadhiiyey halgankii ay ummadu lahay heerkan, dadka la shaqeeyaan ay yihiin beel iyo xukuumada Eritrea, waxaan filayaa in uusan ku guulaysan doonin dacaayada uu afuufayo.
qoraalkan waxaa uu gaar u yahay qoraha, rasaas.com masuul kama ah fikirka macaamiisha.